Danjiraha wadanka Norway u fadhiya itoobiya oo si diiran loogu soo dhaweeyay jigjiga. - Cakaara News
Danjiraha wadanka Norway u fadhiya itoobiya oo si diiran loogu soo dhaweeyay jigjiga.
Jigjiga(CN) Arbaca, December,2, 2015 Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee garaad wiil-waal international Airport jigjiga si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay wafti uu hogaaminaya danjiraha wadanka Norway u fadhiya dalkeena itoobiya mudane Andreas Greedar oo maalmahanba booqasho shaqo ku joogay deegaanka gaar ahaan gobolka shabeele.
Waxaana maanta garoonka siwayn ugu soo dhaweeyay masuuliyiinta sare xukuumada DDSI oo ay ka mid yihiin madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah DDSI marwo sucaad ahmed faarax, madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir xasan. Madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane cabdixakiin cigaal cumar, madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI lehna awood madaxwayne ku xigeen mudane cabdicasiis maxamed cabdi, wasiir ku xigeenka madaxtooyada DDSI mudane deeq cabdilaahi buraale, masuuliyiin kale iyo waliba kooxaha fanka iyo suugaanka DDSI.
Waxaana qolka nasashada ee garoonka kula hadlay warbaahinta DDSI danjiraha safaarada Norway ee dalkeena itoobiya mudane Andreas Greedar oo ugu horayntii u mahad naqay masuuliyiinta sare iyo kooxahan fanka DDSI ee sida diiran ugu soo dhaweeyay jigjiga. Waxaa kale oo uu danjiruhu warbixin dheer ka siiyay warbaahinta soo dhawayntii waftigan loogu sameeyay gobolka shabeele iyo waxqabadka horumarineed ee uu in-dhihiisa ku soo arkay
Danjiruhu isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi” waxaanan waligayo ilaawayn aniga iyo waftiguba sida qotoda dheer ee la noogu soo dhaweeyay xarunta gobolka shabeele ee goday taasi oo ayna noo kala hadhin masuuliyiinta maamulka gobolka shabeele, degmada, maamulka magaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan goday”
Waftigan uu hogaaminayo danjiraha norwayn intii ay joogeen gobolka shabeele waxa ay booqasho ku soo mareen mashaariicaha horumarineed ee ka hirgalay degmooyinka gobolka shabeele gaar ahaan dhinacyada dib u dajinta, waxbarasha, caafimaadka biyaha iyo guud ahaanba adeegyada horumarineed ee bulshada. Taasi oo uu sheegay danjirihu in uu soo arkay waxqabad horumarineed oo aad u dhumucwayn oo si balaadhan u hirgalay sanahihii ugu danbeeyay iyo kuwa hadda sida cilmiyaysan u socda wuxuuna tilmaamay masuulku in uu socdaal koodani yahay mida sii xoojinaya xidhiidhka wadanka norwayn iyo dawlada deegaanka soomalida itoobiya